Microsoft inotanga kuyedza rutsigiro rwekushandisa Linux GUI kunyorera paWindows | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft yakazivisa mazuva mashoma apfuura kutanga kwekuyedza kugona kumhanyisa Linux-based GUI kunyorera munzvimbo dzeWSL2-dzakavakirwa (Windows Subsystem yeLinux).
Zvikumbiro zvakanyatso kubatanidzwa ine main desktop desktop, kusanganisira rutsigiro rwekuisa mapfupi paMenu yekutanga, kuridza ruzha, kurekodha kubva maikorofoni, OpenGL kumhanyisa Hardware, kuratidza ruzivo nezve mapurogiramu ari pabhara rebasa, kuchinja pakati pezvirongwa uchishandisa Alt-Tab, kopi data pakati peWindows neLinux zvirongwa kuburikidza clipboard.
Kugadzirira kuburitsa kweLinux application interface kune iyo huru Windows desktop, iyo RAIL-Shell inosanganisa maneja inoshandiswa yakagadzirwa neMicrosoft, Iyo inoshandisa iyo Wayland protocol uye yakavakirwa paWeston codebase.
Shanduro iyi inoitwa pachishandiswa RDP Remote Application Yakabatanidzwa Nharaunda (RDP Remote Application Yakabatanidzwa Munzvimbo) backend, iyo inosiyana neye RDP backend yaimbovepo kubva kuWeston mukuti composite maneja haape iyo desktop pachayo, asi panzvimbo pacho inodzosera iyo yega nzvimbo ( wl_surface) kuburikidza neRDP RAIL chiteshi kuti uratidze pane yako huru Windows desktop. XWayland inoshandiswa kumhanyisa X11 kunyorera.
Izwi rinobuda rakarongedzwa nePulseAudio server, iyo zvakare inopindirana neWindows ichishandisa RDP protocol (iyo rdp-sink plugin inoshandiswa kuburitsa ruzha uye rdp-sosi yekuisa).
Composite Server, XWayland uye PulseAudio zvakaiswa muchimiro cheyese-yekuparadzira mini WSLGd, iyo inosanganisira zvikamu zvekubvisa giraidhi uye ruzha subsystem, uye zvinoenderana neiyo CBL-Mariner Linux kugovera, inoshandiswa zvakare muMicrosoft gore zvigadzirwa. .. WSLGd inotanga kushandisa nzira dzekuona uye virtio-fs inoshandiswa kugovana pakati peiye Linux muenzi uye iyo Windows inomiririra.
FreeRDP inoshandiswa seye RDP server yakatangwa muWSLGd Linux nharaunda, uye mstsc inoita seRDP mutengi padivi reWindows. Iyo WSLDVCPlugin mutyairi akagadzirirwa kuti aone zviripo graphical Linux application uye uzviratidze muWindows menyu. Iine zvakajairika kugoverwa kweLinux kunoiswa muWSL2 nharaunda, senge Ubuntu, Debian, uye CenOS, iyo WSLGd seti yezvinhu inopindirana nekupa zvigadziko zvinobata zvikumbiro kubva Wayland, X11, uye PulseAudio.
Iyo chaiyo GPU inoitwa paLinux uchishandisa iyo / dev / dxg chishandiso iine masevhisi anoteedzera iwo Windows anoratidza mutyairi modhi (WDDM) D3DKMT yeWindows kernel.
Mutungamiriri anoronga kubatana kune kweGPU chaiyo kuburikidza neVM bhazi, pamwe nekushandisa kweLinux zvine mwero wakaenzana weGPU yekuwana seyakaberekerwa Windows maapplication pasina kumanikidza kugovana zviwanikwa pakati peWindows neLinux.
Performance bvunzo pane Surface Book Gen3 chishandiso ine Intel GPU yakaratidza kuti mune yechinyakare Win32 nharaunda, iyo Geeks3D GpuTest bhenji inoratidza 19 FPS, mune yeLinux nharaunda ine vGPU - 18 FPS uye ne software inopa paMesa - 1 FPS.
Iyo WSLGd kuisirwa inoda Windows 10 Insider Preview ingangoita vhezheni 21362, kunyangwe en iro ramangwana, kugona kuisa WSLGd kuchapihwa edhisheni dzese Windows, pasina chikonzero chekutora chikamu muchirongwa cheInsider Preview.
WSLGd inopa chete nzira dzekupa 2D mifananidzo, uye yekumhanyisa OpenGL-yakavakirwa 3D mifananidzo pane zvinogoverwa paWSL2, zvinokurudzirwa kushandisa chaiyo GPU (vGPU)
Graphics kumhanyisa inopihwa nekupa iyo dura nekuitwa kweOpenGL pamusoro peDirectX 12. Iyo dura yakagadzirirwa muchimiro cheiyo d3d12 mutyairi, iyo yakaverengerwa muchikamu chikuru cheMesa 21.0 uye iri kuvakwa pamwe chete naCollabora.
Kuisirwa kweWSLGd kunoitwa nekumhanyisa iwo chaiwo murairo "wsl -install", semuenzaniso Ubuntu - "wsl -install -d Ubuntu".
Kune nharaunda dziripo dzeWSL2, WSLGd yakaiswa ichishandisa rairo ye "wsl -update" (inzvimbo dzeWSL2 chete dzinoshandisa Linux kernel dzinotsigirwa, kwete kudaidzira dudziro). Iwo graphical maficha akaiswa kuburikidza neyakajairwa package package yeiyo yekugovera kit.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Microsoft inotanga kuyedza rutsigiro rwekushandisa Linux GUI kunyorera paWindows
Sezviri pachena Linux haina kugadzikana kune vamwe vanhu, kana makambani. Kubva pane zvandinoona, poindi ndeyekubvisa Linux munzira.